Mourinho Oo Doonaya Mesut Ozil Iyo Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Qoreen Wargeysyada Ingariiska Maanta Oo Jimce Ah. |
Mourinho Oo Doonaya Mesut Ozil Iyo Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Qoreen Wargeysyada Ingariiska Maanta Oo Jimce Ah.
Tababaraha Manchester United Jose Mourinho ayaa qorsheynaya inuu si lama filaan ah ugu dhaqaaqo xiddiga aan weli qandaraaska u kordhinin Arsenal Mesut Ozil.
Xiriirka kubada cagta Ingariiska ayaan weli magaca Sam Allardyce ka fujinin xafiiska tababaraha xulka England ee Wembley lix isbuuc ka dib markii la ceyriyay.
Chelsea ayaa isha la raaceysa xiddiga khadka dhexe ee kooxda Paris Saint-Germain Marco Verratti.Antonio Valencia ayaa doonaya inuu la fariisto tababaraha Manchester United Jose Mourinho si ay heshiis cusub u gaaraan.
Kooxda Tottenham ayaa wajaheysa dagaal ay ku ceshaneyso goolhaye Hugo Lloris ka dib markii ay joogsadeen wadahadaladii qandaraas kordhinta.
Xiddiga khadka dhexe ee Chelsea John Obi Mikel ayaa diyaar u ah inuu soo gabagabeeyo waqtigiisa Stamford Bridge haddii dalab sax ah miiska loo soo saaro bisha janaayo, ka dib markii uu boos ka waayay tababare Antonio Conte.
Kooxaha Talyaaniag ee AC Milan iyo Napoli ayaa la socda xaalada xiddiga Faransiiska ee Arsenal Oliver Giroud.
Tababaraha Sevilla Jorge Sampaoli ayaa sheegay inuusan xiiseyneynin xiddiga khadka dhexe ee Chelsea Cesc Fabregas inkastoo uu qirtay in Fabregas uu yahay ciyaaryahan uu jeclaan lahaa tababare walba inuu heysto.
Sergio Aguero ayaa ku celiyay inuusan wax qilaaf ah kala dhaxeynin Pep Guardiola. waxaana uu sheegay inuu kaliya Manchester City uga tagayo kooxdii hore ee Independiente.
Memphis Depay ayaa diyaar u ah inuu badbaadiyo mustaqbalkiisa Manchester United isagoo amaah kaga tagaya Old Trafford.
Manchester United ayaa qorsheynaya inay Old Trafford ku soo celiso Michael Keane laakiin daafaca Burnley ayaa waxaa kaga bixi karta qarash badan.
Dhanka kale United ayaa lagu waramayaa inay u soo bandhigeen Bastian Schweinsteiger 9.6 milyan ginni si uu u burburiyo qandaraaskiisa.
Luis Suarez ayaa doonaya in Barcelona ay la soo wareegto saaxiibkiisii hore ee Liverpool Glen Johnson.
Weeraryahanka Newcastle Aleksandar Mitrovic ayaan laga iibin doonin Napoli bisha Janaayo sida uu sheegay wakiilkiisa.
Daafaca midig ee Manchester United Matteo Darmian ayaa weli diirada u saaran Inter Milan inkastoo ay tababare bedesheen.
West Brom ayaa diyaar u ah inay Liverpool kala soo wareegto daafaca Mamadou Sakho iyadoo sidoo kale ay xiiseyneyso kooxda Faransiiska ee Nice.
Borussia Dortmund ayaa dooneysa inay qandaraaska u kordhiso Christian Pulisic xilli ay xiiseyneyso kooxda Liverpool.
Weeraryahanka Atletico Madrid Antoine Griezmann ayaa ka hadlay suurtogalnimada uu ugu wareegi karo Manchester United ka dib markii uu shaaca ka qaaday inuu doonayo inuu ka garab ciyaaro ninka ay isku wadanka yihiin Paul Pogba heer kooxeed.